रेलमा झेल ! कहिले चल्छ रेल ? – Avenues Khabar
रेलमा झेल ! कहिले चल्छ रेल ?
१ माघ २०७७, बिहीबार १५:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौ । पूर्व तयारी बिनै हतारमा नेपाल भित्रयाईएका दुईवटा रेल जिर्ण बन्दै गएका छन । तर रेल संचालनको जिम्मा पाएको नेपाल रेलवे कम्पनी भने रेल आएको ५ महिना बितिसक्दा समेत अन्योलमा देखिएको छ ।
करोडौ लगानी गरेर नेपाल भित्रयाईएका २ वटा रेल यतीबेला बिग्रीने अवस्थामा पुगेका छन । करिब ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको २ वटा रेल गत असोज २ गते जनकपुर ल्याइएको थियो । त्रिपालले छोपेर राखिएका ति रेलमा यतिबेला खिया लाग्न थालेको छ । तर रेल संचालनको जिम्मा पाएको नेपाल रेलवे कम्पनी भने अहीले सम्म अन्योलमा देखिन्छ । एक महीना भित्र रेल संचालन गर्ने बताएका रेल बिभाग र रेलवे कम्पनीले रेल आएको पाँच महीना वितिसक्दा समेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
रेल संचालन गर्ने जिममा पााएको रेलवे कम्पनी रेलकै गतिमा दौडनु पर्ने हो । तर त्यसको ठिक उल्टो कछुवाको गतीमा छ । ३५ किलोमिटर रेल संचालन गर्न करीब २ सय कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर यतिबेला कम्पनीमा १२ जना मात्रै कर्मचारी छन । रेल संचालन त परै जावस कम्पनीले रेल संचालनको लागी आवश्यक पर्ने बाँकी कर्मचारी समेत भर्ना गर्न सकेको छैन ।
खरिद गरेर ल्याईएका रेल समेत संचालन गर्न नसकेको रेलवे कम्पनी भने ले आफु निकटका मान्छे करारमा भर्ना गर्ने योजनामा छ । तर करारमा कर्मचारी राख्न कार्यविधी अनुसार नमिल्ने भन्दै लोकसेवा आयोगले रोकेपछी रेल संचालन थप अनिश्चित बनेको हो ।
यस्तो छ परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यतालिका
४०३ जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप ६ जनाको मृत्यु
ओली-दाहाल भेटवार्ता जारी, नेता खनाल पनि सहभागी
१८ श्रावण २०७७, आईतवार ११:२४
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा…
२२ चैत्र २०७६, शनिबार १९:३७
काठमाडौं: कोरोना भाइरसको उपचारमा अत्यावश्यक…
मोरङको दक्षिणी सिमावर्तीका ६ वटा स्थानीय तहमा पठनपाठन सुचारु हुँदै
१० मंसिर २०७७, बुधबार ०८:३८
मोरङ : मोरङको दक्षिणी सिमावर्तीका ६ वटा…
१३ पुष २०७७, सोमबार १९:१७
चीनले वुहानमा कोरोना भाइरसको महामारीबारे…
४ माघ २०७७, आईतवार १३:०२
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०९:०८
काठमाडौं : नेपालमा थप ३० जनामा कोरोना संक्रमण…
ओलीले आफुलाई अलग–अलग हिडन आग्रह गरे : दाहाल
१६ कार्तिक २०७७, आईतवार १७:५१
काठमाडौ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले…
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको इजलासको स्वरुपमा न्यायाधीशहरुले नै उठाए प्रश्न
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासको साटो…
पर्साको सबैठवा नाकामा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप
पर्सा : पर्साको सबैठवा नाकामा तनाव भएको छ । केही दिनअघि सशस्त्र प्रहरीले नाकामा तस्करीमा सहयोग गरिरहेको…
राजसंस्था तथा हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा विशाल प्रदर्शन
झापा: राजसंस्था तथा हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आयोजनामा झापामा शनिवार…
काठमाडौं : कोरोनामुक्त भएर घर फर्किएका पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाका एक युवकले आत्महत्या गरेका छन ।…
एजेन्सी : टोटनह्याम…